Kachasị mma: Olee otú iji mara ọdịiche dị n'etiti ndị ọzọ?
Karịa: Kedu otu esi amata ọdịiche dị n'etiti ndị ọzọ?
Ikekwe, ị jụọla ihe ọ pụtara »Bu kariri«, Na otu esi amata ọdịiche ya na akara mgbakọ na mwepụ ndị ọzọ. Ọ dị mma, n'amaghị otu esi amata ya, bụ ihe dị mma ruo mgbe anyị matara ha. Ya mere, n'isiokwu a na -atọ ụtọ ma na -enye nkọwa, anyị ga -akọwa nke ọma ihe niile gbasara onye nnọchite anya ahaghị nhata. Ọ ga -atọ ụtọ!.
1 Kari karịa
1.1 Ihe atụ na nsogbu
2 Kedu akụkụ nke m ga-edebe ihe karịrị akara ngosi?
2.1 A bit nke akụkọ ihe mere eme
2.2 Omume na ụzọ isi na-eme ihe
Na mgbakọ na mwepụ, a na-eji akara akara iji gosi ọdịiche nwere nke nwere karịa ma ọ bụ pere mpe karịa ndị ọzọ. Ke idaha enye emi, ẹkeda idiọn̄ọ iba: okpon akan (>), na ihe na-erughị akara (<). Onye ọ bụla nwere ihe nnọchianya dị ka akụ ma ọ bụ V na-agbagharị, na-egosipụta oghere kachasị ukwuu na ọnụ ọgụgụ kachasị ukwuu, na-adịkarị n'akụkụ aka ekpe.
Ihe atụ na nsogbu
Mgbe anyị hụrụ nọmba ụfọdụ, anyị nwere ike ịchọpụta nke kachasị nke kachasị na nke pere mpe. Iji maatụ: Anyị nwere ọnụ ọgụgụ ndị a ma anyị ga-achọta nke kachasị na pere mpe: 1,3 na 5.
N'okwu a, anyị maara na ọnụọgụ nke 5 bụ nke kachasị ukwuu, na-esote 3, wee bụrụ nke kacha nta niile bụ 1. Mana, iji chịkọta usoro a niile, anyị na-aga n'ihu iji akara kwekọrọ: nke kachasị (>), dị ka ndị a: 5> 3> 1.
Ọ na-abụkarị ụlọ akwụkwọ inwe ụfọdụ ọgba aghara n'oge edere, mana ọ nweghị ihe omume ahụ anaghị edozi ya. Ọ bụrụ na akara ndị a esiri ike, nkuzi nkuzi ma ọ bụ omume dị n'etiti ọnụ ọgụgụ dị iche iche nwere ike ịme.
Mana, ọtụtụ ụmụ akwụkwọ na-esiri ya ike ma a bịa na ọnụ ọgụgụ buru ibu. Nke a na - eme, n'ihi na nkeji anaghị agbanwe ọdịiche dị iche, nke a na - eme ka ị ghara ịmara oke ọnụọgụ a na - edozi.
Iji maa atụ: Anyị nwere ọnụọgụ ndị a: 106.781 na 105.450.
Na nke a, 106.781 (gụọ: otu narị puku isii, narị asaa na iri asatọ na otu) na 105.450 (gụọ: otu narị puku ise na narị ise, narị anọ na iri ise). N'ụzọ dị otú a, ịmata otu esi amata ọdịiche dị na nkeji na otu esi agụ nke ọ bụla, anyị ga-amata nke kachasị ukwuu.
106.781 karịrị 105.450. Ya mere, iji okpon akan, anyi aghaghi ide ihe n'uzo na-esote: 106.781> 105.450.
Ọ dị mkpa na a mụtara nkeji ahụ n'ụzọ ziri ezi, iji nwee ọdịiche dị ukwuu na nke dị obere karịa.
Kedu akụkụ nke m ga-edebe ihe karịrị akara ngosi?
Ihe ịrịba ama a ga-eduzi oghere kachasị mgbe niile na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu, na-atụkarị ọnụ ọgụgụ ahụ ọnụ ọgụgụ kachasị ukwuu n'akụkụ aka ekpe.
Iji zere mgbagwoju anya n'oge ederede, ekwesiri icheta na ọ bụrụ na oghere mmalite n'akụkụ aka nri (n'otu ụzọ ahụ ọ ga-egosi nke ka ukwuu), mana na nke a, akara ngosi nke mmega ahụ ga-anọchi anya obere karịa.
Ka anyị jiri ndị na-esonụ quantities dị ka ihe atụ, na-achọpụta na okpon akan nke ọnụọgụ ndị ọzọ, na ọnụ ọgụgụ niile: 30, 15, 35, 100, 120.
N'ihi: 120> 100> 35> 30> 15. Anyị nwere ike ịhụ na okpon akan, nwere oghere buru ibu buru ibu karie nke ozo, na-akanye ihe di iche di n'etiti ha. A na-akpọ nke a ahaghị nhata (n'ihi na ọnụọgụ abụọ abụghị otu. Nke ahụ bụ, otu dị ukwuu karịa nke ọzọ).
Ọ bụrụ na anyị na-eme ka a tụnyere na erughị ihe ịrịba ama, anyị nwere ike ịhụ oghere dị n'akụkụ aka nri, mana na nke a, anyị ga-achọpụta na anyị na-ezo aka na ọnụọgụ nke dị n'akụkụ aka ekpe, na-egosi na ọ pere mpe karịa nke na-eso.
Anyị ga-ewere ọnụọgụ ndị anyị ji mee ihe atụ dị n'elu, mana anyị ga-anọchi anya obere akara, ugbu a:
15 <30 <35 <100 <120. Anyị nwere ike ịhụ oghere dị n'akụkụ aka nri, mana anyị na-egosi n'akụkụ aka ekpe nke pere mpe karịa nke na-esote. Ya mere, anyị nwere ike ịsị: 15 erughị 30, 30 erughị 35, 35 erughị 100, 100 erughị 120.
Iji mee ka ọ dịrị gị mfe karị icheta akara ndị ahụ, ị ​​nwere ike ịchọpụta na akụkụ na-egosi ego pere mpe dị obere. N'ụzọ dị otú a, ị ga-enwe ike ịkọwa ihe ịrịba ama ahụ ọsọ ọsọ mgbe ịchọtara onwe gị na oke ma ọ bụ karịa. Ọ dị mfe, nri?
Rịba ama: ọ dị mkpa ka ị mụta ịgụ akara ahaghị nha na ọnụọgụ ndị ahụ, ka ị wee nwee ike ịmatakwu ọnụ ọgụgụ dị iche na ihe kpatara ya.
Achọtara ihe ịrịba ama ndị a na nke mbụ ya na 1631, n'akwụkwọ banyere idozi usoro akara algebra nke Thomas Harriot kwuru: (onye Bekee na mgbakọ na mwepụ na mbara igwe). O doro anya na ọ bụ nna nke akara mgbakọ na mwepụ.
Ọ bụghị naanị na ọ hapụrụ nnukwu ihe nketa na mpaghara nke anya na nchapu ọkụ na ihu dị iche iche, mana o jikwa ike mepụta ụzọ dị iche iche iji gosipụta ọtụtụ ụdị mgbakọ na mwepụ. Nke doro anya na-enyere anyị aka nke ukwuu taa.
N'ihi na ekele maka akara ndị a (karịa - na-erughị, n'etiti ndị ọzọ), anyị nwere ike ịme ngwa ngwa ngwa mgbe anyị na-ekwu maka ọnụọgụ na ọnụọgụ.
Omume na ụzọ isi na-eme ihe
Emega A: 1.000 na 500. N'okwu a, ị ga-ajụrịrị onwe gị, Kedu ego kachasị ukwuu ebe a? Aka nri! 1.000 ka ukwuu. Ugbu a, ị ga-eji akara ngosi ziri ezi dee ya.
1.000> 500: Puku puku karịrị narị ise. (1.000 karịrị 500).
Mgbatị B: 345, 250 na 620. must ga-amarịrị otu esi amata ọdịiche dị iche iche wee gụọ ha nke ọma ka ị nwee ike ịmata ndịiche dị elu na ndị ọzọ.
620 kacha ibu. Ihe na-esote ya bụ 345 na n’ikpeazụ, nke pere mpe bụ 250. Mgbe ahụ, anyị ga-ede ha na akara aka ka ukwuu:
620> 345> 250: narị isii na iri abụọ karịrị narị atọ na iri anọ na ise, narị atọ na iri anọ na ise karịrị narị abụọ na iri ise. (620 karịrị 345, na 345 karịrị 250).
Mgbatị C) 1600> 1559: Otu puku narị isii bụ ego karịrị otu puku, narị ise na iri ise na itoolu. (1600 karịrị 1559).
Omume D) 20 < 21: iri abụọ na-erughị iri abụọ na otu. (20 bụ ihe na-erughị 21).
Mara: Cheta na ị ga-amụta ịgụ ọnụọgụgụ, ọ dị mkpa ka ị mara ka esi amata ọdịiche dị na ọnụ ọgụgụ ahụ n'ụzọ ziri ezi, ị ga-eburu isi akara aka nke obere, ma n'ikpeazụ, ọ dị mkpa na ị ga-etinye ihe kpatara ha abụọ ahaghị nhata, na nke a, naanị ị ga-ede ọnụọgụ ma kọwaa akara kwekọrọ.
Cheta na mgbakọ na mwepụ anaghị esiri gị ike ma ọ bụ gbagwojuru anya, naanị ihe ọ chọrọ bụ ime ya eme. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịga n'ihu mmụta, ị ga-agarịrị njikọ a: Onu ogugu.
Ike ike gịnị bụ ya? Olee otu esi hiwe ya? na ọtụtụ ndị ọzọ
Tribole Isosceles: Kedu ihe ọ bụ? nhazi ọkwa na ndị ọzọ
Main geometric ọgụgụ na aha ha
Gịnị bụ mmehie? Gịnị kpatara ya? Na ọtụtụ ndị ọzọ
Ihe na-erughị ihe ịrịba ama: Gịnị bụ ya na mgbe kwesịrị iji ya?